အခမဲ့ဂီတ - Androidsis | Androidsis (စာမျက်နှာ ၂)
Amazon Music Unlimited ကို ၄ လကြာယူရို ၁ ယူနစ်ဖြင့်ခံစားပါ
အမေဇုံက ၄ လကြာ Amazon Music Unlimited ကို ၀.၉၉ သာပေးတယ်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် Sony ၏ Music Walkman ကို download ပြုလုပ်ရန်ဗားရှင်းအဟောင်းကိုကျွန်ုပ်ထံသို့ယူဆောင်လာပါပြီ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စတင်ခြင်းကိုထိန်းညှိရန် zoom ဆွဲရန်ကျန်နေသေးသည့် version ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဂီတပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကရက်ပေါင်း ၃၀ အခမဲ့ Amazon Music Unlimited အထူးကမ်းလှမ်းချက်ကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
Spotify သည်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုလျှော့ချရန် timer တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်
Android တွင် Spotify မှမိတ်ဆက်တော့မည့် timer အကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ၊ ၎င်းကိုသင်အချိန်အတန်ကြာပြီးနောက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်သည်။
Spotify ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက် ၄ ခု
သင်၏ရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်များအကြောင်းသင်၏ Android ဖုန်းတွင်အလွန်အဆင်ပြေသောနည်းဖြင့် Spotify မှပိုမိုများပြားသောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
Deezloader ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာအတွက်သုံးတာလဲ
Deezloader ဆိုတာဘာလဲ၊ Android အတွက်မည်မျှအသုံးဝင်သည်၊ Deezer ဂီတ streaming ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Android မှာ Spotify beta ကိုဘယ်လို sign up လုပ်မလဲ
Android တွင် Spotify အတွက် beta tester ဖြစ်လာရန်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်း၏အင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုအခြားမည်သူ့ကိုမဆိုစမ်းသပ်ရန်သင်လုပ်ရမည့်အဆင့်များကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏ Android ဖုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးရေဒီယိုအက်ပလီကေးရှင်းများ
Android အတွက်ဒီရေဒီယို application လေးခုကိုရှာဖွေပါ။ သင်စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိသင်အကြိုက်ဆုံးအသံလွှင့်ရုံကိုအလွယ်တကူနားထောင်နိုင်သည်။
Stingray Music ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း၊ Spotify အတွက်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာ၊ ကြော်ငြာမပါဘဲနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်
Stingray Music ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုပြသတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ။ စပိန်ပိုင်နက်မှာမရနိုင်တဲ့ကြော်ငြာတွေမပါဘဲအခမဲ့ Spotify အတွက်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခု။
အခမဲ့သုံးလ Google Play တေးဂီတ
Google Play ဂီတကိုအခမဲ့သုံးလကြာအောင်ကြိုးစားနိုင်သည့်ဤပရိုမိုးရှင်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
YouTube Music သည် Android ၏ဂီတဖွင့်စက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်
YouTube Music ကို Android တွင်ဂီတဖွင့်ရန် Google ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Twitter ရှိ Apple Music အကောင့်သည် Android စမတ်ဖုန်းကို သုံး၍ streaming music platform မှ tweets အချို့ကိုထုတ်လွှင့်သည်
MotoMusic, အပေါ့ဆုံးကစားသမား,4MB သာရှိသော်လည်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အထင်ကြီးလေးစားမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုရွေးချယ်စရာများရှိသည်
ဤသည်သည် streaming များမှသီချင်းများကိုနားထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံး app ဖြစ်သည်
streaming လုပ်ခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းတို့ဖြင့်တေးဂီတကိုနားထောင်ရန်ခွင့်ပြုမည့် Impressive အက်ပလီကေးရှင်းသည်ရိုးရှင်းစွာလှပသောအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်မှဖြစ်သည်။
သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့် Amazon Prime တွင်အထူးသီးသန့်အထူးလျှော့စျေးကိုရယူပါ
ဤပရိုမိုးရှင်းကို Amazon Prime တွင်ရှာဖွေပါ။ ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်ရုံဖြင့်စတိုးဆိုင်တွင်ယူရို ၃ ဒေါ်လာလျှော့စျေးဖြင့်ရနိုင်သည်။
Spotify for Android အတွက်နောက်ထပ် update တစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောဂီတကို application ထဲသို့တင်သွင်းရန်အတွက် function အသစ်တစ်ခုကိုထည့်နိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်နာရီအက်ပ်တွင်နှိုးစက်နာရီမှ Spotify တေးဂီတကိုမည်သို့သုံးရမည်နည်း
Android တွင်ရှိသော Google နာရီအက်ပ်များ၏နှိုးစက်များတွင် Spotify သီချင်းကိုနှိုးစက်နာရီအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုလေ့လာပါ။
သင်တစ်နေ့တာတွင်အနားယူရန် Zen ဂိမ်းကိုသင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်ဤသည်သည်သဟဇာတဖြစ်သည်။ အလွန်ကြော့အမြင်အာရုံစတိုင်နှင့်အတူဂီတပဟေ.ိ။
ကြော်ငြာမပါဘဲ Android အတွက်အကောင်းဆုံးကစားသမားရွေးချယ်ခြင်း။ ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုကိုကူးယူပြီးဂီတဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုခံစားပါ။
သင်၏ Spotify ဖွင့်ရန်စာရင်းများကိုမည်သို့တင်ပို့ရမည်နည်း
Spotify ဖွင့်ရန်စာရင်းများကိုမည်သို့တင်ပို့ရမည်နည်း။ streaming ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဤစာရင်းများကိုတင်ပို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာကိုရှာဖွေပါ။
ဂူးဂဲလ်နေအိမ်အသစ်တွင် Netflix နှင့် Spotify ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကို Google Assistant နှင့် Chromecast ထဲသို့မည်သို့ချရမည်နည်း
Netflix နှင့် Spoti အကြောင်းအရာများကို Google Assistant နှင့်အတူ Chromecast သို့ပို့ရန် "Living Room တွင် Stranger Things Play" ဟူသောအသံ command ကိုအသုံးပြုပါ။
တေးဂီတကို Google Play တေးဂီတသို့တင်ပို့နည်း
ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတတွင်ဂီတကိုမည်သို့တင်မည်နည်း။ ဂီတကို Google ဂီတပလက်ဖောင်းသို့တင်ရန်အဆင့်များရှာဖွေပါ။
Spotify ကသီချင်းတွေကိုသုံးဆတိုးစေပါလိမ့်မယ်။ လူကြိုက်များသောဆွီဒင်အက်ပ်တွင်မိတ်ဆက်ခြင်းအင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက် Apple Music ၏နောက်ဆုံး beta သည် Android Auto နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ streaming ဂီတစျေးကွက်သည်ကိစ္စနှစ်ခုစတင်ခဲ့သည်ဟုထင်ရသည့်အခါ Google နှင့် Amazon နှစ်ခုစလုံးက Android Music အတွက် Apple Music အတွက်အထောက်အပံ့ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင့်အားထိန်းချုပ်နိုင်မည့် Android Auto အတွက်အထောက်အပံ့ပါဝင်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်၏ multimedia စင်တာမှပြန်ဖွင့်။
ဂီတသမားများအတွက်အကောင်းဆုံး Android အက်ပလီကေးရှင်းများ တေးဂီတကိုလေ့လာရန်အတွက်ဤရွေးချယ်မှုများကိုရှာဖွေပါ။
ဂူဂဲလ်နာရီကိုအဆင့်မြှင့်ထားပြီးယခုတွင် Spotify မှသီချင်းတစ်ပုဒ်သို့မဟုတ်စာရင်းတစ်ခုကိုနှိုးစက်သံအဖြစ်ထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုထားသည်
Spotify Lite ကိုယခုတရားဝင် Wear OS အတွက်တရားဝင်မရရှိသေးပါ
XDA Developers အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုစီမံရန်ခွင့်ပြုထားသော Wear OS အတွက်တရားမဝင်သော Spotify Lite version ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Spotify Lite ကို Google Play စတိုးတွင်စတင်ပြီးဖြစ်သည်
Spotify Lite ကို Play Store တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ရေပန်းစားသော streaming ဂီတအက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
YouTube Music သည်ငါတို့အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၇ နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီးကြော်ငြာအခမဲ့ဂီတဗီဒီယိုများနှင့်နောက်ခံတွင်ကစားနိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည်။
[APK] LinageOS Eleven ဂီတဖွင့်စက်
အကယ်၍ သင်သည် Amazon Prime မှဖြစ်လျှင် Amazon Music ကိုအခမဲ့အခမဲ့ရနိုင်သည်
ယခု Amazon Music သုံးစွဲသူများအတွက် Amazon Music သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သီချင်း ၂ သန်းရွေးချယ်မှုနှင့်ကြော်ငြာမပါဘဲတစ်လနာရီ ၄၀ အကန့်အသတ်ရှိခြင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းတွင်အော့ဖ်လိုင်းနားထောင်ရန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။
Groove Music application ကိုမိုက်ကရိုဆော့ဖ်က Play Store မှဖယ်ရှားလိမ့်မည်
OneDrive တွင်သိမ်းဆည်းထားသောသီချင်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့် Groove Music application ဖြစ်သော Microsoft သည် Play Store မှနုတ်ထွက်လိမ့်မည်။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခမဲ့ထုတ်လွှင့်နိုင်သောဒေသခံဂီတဖွင့်စက်သည်သင့်အားပါးစပ်ဖြင့်ပွင့်စေပြီးကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံးအတွက်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်များကြောင့်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ YouTube ဖွင့်ရန်စာရင်းများကိုအသံမျက်နှာပြင်ကိုပိတ်ထားရုံဖြင့်တင်ပို့နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မည်သည့် Android တွင် Huawei P20 တေးသီချင်းဖွင့်ရမည်နည်း
ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာဗားရှင်း ၄.၂ (သို့) ပိုမြင့်တဲ့ဗားရှင်း Android နဲ့ Huawei P20 ရဲ့တေးဂီတဖွင့်စက်ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Spotify ဗားရှင်းအသစ်ကိုကျပန်း mode မရှိဘဲတောက်ပနေသောအရာအားလုံးသည်ရွှေလား၊ သို့မဟုတ်ထို Spotify စက်ဘီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရောင်းသည်ဟုတ်မဟုတ်သိရန်ကျပန်းစနစ်မရှိဘဲစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
Aprilပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင်ဆွီဒင်လွှင့်ဂီတကုမ္ပဏီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကားတွင်စီးဆင်းသောဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုကိုခံစားနိုင်မည့်စက်အသစ်တစ်ခုကိုတင်ပြနိုင်သည်။
2 Spotify မှအခမဲ့အခြားရွေးချယ်စရာများ
Dogfood ကဲ့သို့သော mods များနှင့်အစားထိုးရန်သင့်အား Spotify အတွက်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ၂ ခုကိုကျွန်ုပ်ပို့ပေးပါ။
Android 3D Sourround Music Player အတွက်တေးဂီတဖွင့်စက်ကိုလေ့လာခြင်း၊ ၎င်းသည် ၁၅ ရက်ကြာအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီး၎င်းသည် ၁၁ ယူရိုကုန်ကျသည်။ သို့သော်ထို ၁၁ ယူရိုနီးပါးကိုပေးဆပ်သင့်သလော။
သင့်အတွက်ဂီတဖွင့်စက်3ကို apk format ဖြင့်ယူဆောင်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ပြန်လာပါမည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အချိန်တွင် Android အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကစားသမားများဖြစ်သည်။
Viper4Android နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော SoundCloud Music Mod [APK]
ဤနေရာတွင်သင့်ကိုစွန့်ခွာပြီး SoundCloud Music Mod apk မှမည်ကဲ့သို့တပ်ဆင်ရမည့်နည်းလမ်းနှင့်လူမှုရေးသဘောသဘာဝ streaming ဂီတကိုနားထောင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြသသည်။
Android မှာအကောင်းဆုံး Spotify လှည့်ကွက်
Android တွင် Spotify မှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများသုံးခု။ လူကြိုက်များသော application ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ဤရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်များကိုရှာဖွေပါ။
အခုဆိုရင် Amazon Music Unlimited ၂ လအခမဲ့မိသားစုအစီအစဉ်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးစရာမလိုပဲငှားရမ်းနိုင်ပါပြီ။
Youtube သည် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်: Red + Play Music ကိုစတင်မည်
YouTube သည်မတ်လတွင် subscription service ကိုစတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ လာမည့်နှစ်တွင် YouTube သို့လာမည့်ဝန်ဆောင်မှုအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
[APK] နောက်ဆုံးပေါ် Xperia Music No ROOT Android 4.4 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ဒီနေရာတွင် Android 4.4 နှင့်အထက်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောနောက်ဆုံးပေါ် Xperia Music no ROOT ဗားရှင်း Sony terminal ၏ port ရှိသည်။
Amazon Music Unlimited တွင်ရက်ပေါင်း ၃၀ အခမဲ့သီချင်းများနှင့်သင်သုံးစွဲသူချုပ်သာဖြစ်ပါကအမေဇုံတွင် ၁၀ ယူရိုသုံးစွဲပါ
Amazon Music Unlimited တွင်ရက်ပေါင်း ၃၀ အခမဲ့ဂီတကိုသင်ရယူလိုပါသလား။ ဤနက်သောသောကြာနေ့အမေဇုန်တွင်သုံးစွဲရန်အခမဲ့ယူရို ၁၀ ဒေါ်လာရလိုပါသလား။
Soundtrap - Spotify ဝယ်ယူထားသည့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သီချင်းများရေးရန်လျှောက်လွှာ
Spotify သည်ဆွီဒင်ဂီတတေးသီချင်းအတွက် Soundtrap ကိုဝယ်ယူရသည့်အကြောင်းရင်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
နောက်ဆုံးပေါ် Apple Music update ကကျွန်တော်တို့ကို Google ရဲ့ Chromecast ကိရိယာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရာပေးထားတယ်၊ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ TV မှာသူ့ရဲ့ catalog ကိုပျော်မွေ့စေလိမ့်မယ်
အမေဇုံဂီတအက်ပလီကေးရှင်းက Alexa အတွက်ပံ့ပိုးမှုပေးသည်
အမေဇုံက Amazon Music App ကိုသူ့ရဲ့သန်းချီသောစက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ယခုရရှိနိုင်သည့်၎င်း၏ Alexa Virtual Assistant ကိုထောက်ပံ့မှုထပ်မံတိုးချဲ့သည်
Google Home သည်ယခုအခါအခမဲ့ Spotify အကောင့်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
သုံးလအကြာတွင်ဂူးဂဲလ်သည်အခမဲ့ Spotify အကောင့်များကို Google Home စပီကာသို့ထပ်မံဖြည့်တင်းပေးပြီး၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဒီနေရာမှာလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ကိုမထွက်ပဲအခမဲ့ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး Telegram bot ဆိုတာကိုဒီမှာတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Sony Music သည် Android Auto အတွက်မကြာမီအထောက်အပံ့များပေးလိမ့်မည်
Sony Music သည်ဤကြီးမားသည့်ဂီတဖွင့်စက်ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်သတင်းအသစ်များယူဆောင်လာပြီးသင်၏ကားခရီးများကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေမည်မှာသေချာသည်။
Spotify သည်ပြန်ဖွင့်ခြင်းပုံစံဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့ကကားမောင်းနေစဉ်လျှောက်လွှာကိုသုံးသောအခါမလိုအပ်သောအာရုံပျံ့လွင့်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်
Spotify သည် Messenger ပေါ်တွင် group playlists များဖန်တီးနိုင်သည်
Messenger အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏သီချင်းများဝေမျှနိုင်ပြီးအခြားသူများကိုပူးပေါင်း playlists တွင်ပူးပေါင်းပါစေလိမ့်မည်
Music Day ကိုကျင်းပရန်အကောင်းဆုံး Android ဂီတဖွင့်စက်
ယနေ့ခေတ် Music Day ဖြစ်ပြီး Androidsis မှ Android အတွက်အကောင်းဆုံးတေးဂီတဖွင့်စက်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ပြုကြသည်
Google က Galaxy S8 အတွက်သီးသန့် Play Music feature ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Play Music သည် Galaxy S8 နှင့် S8 Plus အသုံးပြုသူများကို "New Release Radio" ဟုခေါ်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်အားအရသာအတွက်အဆင်ပြေစေမည့်သီချင်းများဖြင့်သီးသန့်ပေးထားသည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့် Android အတွက်«လူမှုရေးဂီတဖွင့်စက်»
လူမှုရေးဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဒီမှာသင်ဟာ "social" လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကြောင့်သင်အဲဒါကိုချစ်သွားမှာပါ။
Google Play Music သည်ယခုအခါသုံးစွဲသူအသစ်များအတွက် (၄) လအခမဲ့ဖြစ်သည်
Musicolet၊ ပေါ့ပါးသောဂီတဖွင့်စက်၊ ကြော်ငြာမပါ၊
ဤတွင် Musicolet သည်ပေါ့ပါးသောဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာများမပါရှိသည့်အပြင်သုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် ၀ ယ်ယူမှုများလည်းပါ ၀ င်သည်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၏တံခါးများတွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ခံရသော Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်အချို့နှင့်သင်ရွေးရန်အဆိုပြုထားသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးအခမဲ့ဖြစ်သည်
သီချင်းစာသားရဲ့နောက်ကွယ်မှာ၊ သင်နားထောင်နေသည့်သီချင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးသောထိုအင်္ဂါရပ်သည်ယခု Android အတွက် Spotify တွင်ရနိုင်သည်
၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည်ကွန်ရက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သော ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် hardware ကျွမ်းကျင်သူများကိုရှာဖွေနေသည်။
Samsung ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်အားလုံးသည် Google Play Music ကိုမူလဂီတဖွင့်စက်အဖြစ်သီးသန့်လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်အသုံးပြုမည်။
Facebook Messenger မှတဆင့် Spotify တေးသီချင်းများကိုသင်မျှဝေနိုင်သည်
Facebook Messenger သည်သုံးစွဲသူများအား Spotify နှင့် Apple Music မှသီချင်းများ၊ ဖွင့်ရန်စာရင်းများနှင့်အယ်လ်ဘမ်များကိုအက်ပလီကေးရှင်းမှမပါဘဲမျှဝေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
Spotify Premium ကိုသင်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါကစျေးနှုန်းတစ်ဝက်ဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်
Spotify သည် ၄ ​​င်း၏ကမ်းလှမ်းချက်အားနိုင်ငံအသစ် ၃၃ ခုတွင်စျေးနှုန်းတစ်ဝက်ဖြင့် Spotify Premium သို့တစ် ဦး ချင်းစာရင်းပေးသွင်းခြင်းပါဝင်သောကျောင်းသားများကိုရည်ရွယ်သည်
Android အတွက်တေးဂီတဖွင့်စက်သည် S8 Edge ၏အမည်အောက်တွင် Music Player သည် Edge terminal ၏ဂီတဖွင့်စက်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတုပလိုသော
ဒီ post မှာတော့ Spotify အတွက် shutdown timer မပါဘဲ၊ ပူးတွဲပါဗီဒီယိုမှာသင့်ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းစေမှာပါ။
Android အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသီချင်းဖွင့်စက် !!
ဒီနေရာမှာ Android အတွက်ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့တေးဂီတဖွင့်စက်ကိုငါထားခဲ့မယ်၊ ငါမင်းအတွက်ငါတွေ့ခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးထဲမှာတစ်ခုပါ။
သင်နားထောင်နေသည့်တေးဂီတကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်အက်ပလီကေးရှင်းကသင့်ကိုအသုံးဝင်သောအကြံပြုချက်များပေးသည့်အပြင် You Tube ပေါ်ရှိဗီဒီယိုကလစ်ပုံစံဖြင့်သင်အားပြသရန်သင့်အားပြသရန်။
[APK] Free Spotify အလိုအလျှောက်အသံလွှင့်သီချင်းများနားထောင်ရန်တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော Spotify ပရီမီယံအင်္ဂါရပ်များနှင့်ကိုယ်ပွား
ဤနေရာတွင် Spotify clone apk သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အော့ဖ်လိုင်းကိုနားထောင်ရန်တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော Spotify Premium ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
[APK] [ROOT] မည်သည့် Android တွင်မဆို Sony Xperia XZ Premium ၏တေးဂီတအက်ပလီကေးရှင်းကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည် (နောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်း)
ဒီနေရာမှာ Sony Xperia XZ Premium ဂီတအက်ပလီကေးရှင်းကိုမည်သည့် Android တွင်မဆိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုဤသင်ခန်းစာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
3 AMOLED ဖန်သားပြင်အတွက်တေးဂီတဖွင့်စက်
ဒီဗီဒီယိုပို့စ်အသစ်မှာ AMOLED ဖန်သားပြင်တွေအတွက်အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ဂီတဖွင့်စက်သုံးခုကိုငါယူလာပေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်မျက်နှာပြင်မဆိုသုံးနိုင်တယ်။
သင်သည်အခမဲ့အသံအရည်အသွေးဖြင့်အခမဲ့တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကြိုးစားနေပါက VK Music မှမည်သို့တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ပြသမည် ဖြစ်၍ သင်နေရာမှန်၌ရှိနေသည်။
[APK] ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတ ၇.၄ တွင်ဗားရှင်းအသစ်ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
Google Play Music 7.4 ၏ဗားရှင်းသစ်ကိုသတင်းများနှင့်သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုများနှင့်မည်သို့ကူးယူရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးပါသည်
3 စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ကူပြီးအလုပ်လုပ်သော Android ဂီတဖွင့်စက်များ
ဒီနေရာမှာ Android အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Music Players (၃) ခုကိုကျွန်တော်ယူဆောင်လာပါပြီ။ အဲဒါဟာသင်မလွဲမရှောင်သာမဖြစ်နိူင်သောအလွန်ပေါ့ပါးပြီးအလုပ်လုပ်ခြင်းပါ။
အသံမြည်အောင်ပြုလုပ်ထားသော Android အတွက်သီချင်းဖွင့်စက်
ဤနေရာတွင် Android အတွက်ဂီတဖွင့်စက်ရှိသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့်ကွဲပြားခြားနားပြီးရောင်စုံဂီတဖွင့်စက်။
Prince ကို Google Play Music နှင့်အခြား streaming ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကခန့်မှန်းထားသည်အတိုင်း, နှောင်းပိုင်းအဆိုတော်ရဲ့ catalog အများစု ...
Snaptube အထောက်အပံ့ဖြင့်ပျော်စရာကောင်းသော Android ဂီတဖွင့်စက်
Android အတွက်တေးဂီတဖွင့်စက်ကိုငြီးငွေ့နေသလား။ ယနေ့ငါသည်သင်တို့ကို Snaptube အထောက်အပံ့ဖြင့် Android အတွက်ပျော်စရာကွဲပြားခြားနားသောတေးဂီတဖွင့်စက်ကိုယူဆောင်လာသည်။
SoundCloud သည် "New Releases" နှင့် "Top 50" list များကိုကမ္ဘာအနှံ့ရောအမျိုးအစားအလိုက်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင်နှစ်သက်သောဂီတကိုရှာဖွေရန်ကူညီပေးသည်။
ပိုကီမွန် GO တွင်အမဲလိုက်နေစဉ်ယခုသင်ဂီတကိုနားထောင်နိုင်သည်
Pokémon GO သည်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံး Android update တွင်ဂိမ်းကစားနေစဉ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းများကိုနားထောင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့်အတူအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။
သီချင်း၏အယ်လ်ဘမ်အနုပညာနှင့်အတူနေရာအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်ဖို့စီမံသောအသစ်ပြန်ဖွင့်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ Spotify စမ်းသပ်မှု။
အကောင်းဆုံး retro ဂီတဖွင့်စက်၊ အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၆၀၊ ၇၀ နှင့် ၈၀ ပြည့်သူများဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင့်ကိုချစ်လိမ့်မည်!
ယနေ့ငါသည်သင့်အားလွမ်းဆွတ်မှုအရှိဆုံး၏မျက်ရည်များကိုမျက်ရည်ကျစေပြီး၎င်းကိုသင့်အားအခြားခေတ်သို့ဆက်သွယ်ပေးမည့် retro ဂီတဖွင့်စက်ကိုယူဆောင်လာသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဂီတစာကြည့်တိုက်မှအခမဲ့ mp3 သီချင်းကို download လုပ်ပါ
ယနေ့ခေတ်တွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဂီတစာကြည့်တိုက်မှအခမဲ့ mp3 သီချင်းများကိုမည်ကဲ့သို့ download ဆွဲရမည်ကိုသင်တစ်ဆင့်ချင်းစီပြသပါမည်။
Android အတွက်အပေါ့ပါးဆုံးဂီတဖွင့်စက်သည် ၁ မီလီဂရမ်အောက်သာရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးစွမ်းသည်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Android အတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသီချင်းဖွင့်စက်ကိုယနေ့တင်ပြနေပါသည်။
ယနေ့တွင် Samsung ဝတ်ဆင်နိုင်သော Gear S2 နှင့် Gear S3 နှစ်ခုသည် Spotify တွင်တေးဂီတကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
လူကြိုက်များသည့်တောင်းဆိုမှုအရယနေ့သင်အားအခမဲ့ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက် Huawei ဂီတဖွင့်သည့်မူလ Huawei ဂီတကိုမည်သို့တပ်ဆင်အသုံးပြုရမည်ကိုသင်ကြားပေးနေသည်။
Alcatel ၏အထင်ကြီးစရာကောင်းသော Onetouch ဂီတဖွင့်စက်ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသပါသည်
ဒီနေ့မှာတော့သင်ဟာ Alcatel's Onetouch ဂီတဖွင့်သည့် Onetouch တေးဂီတကိုဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုယူလာပေးပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် Spotify သည် Souncloud ကိုမဝယ်ပါ
လပေါင်းများစွာဆွေးနွေးမှုများအပြီးတွင်နောက်ဆုံးတွင် Spotify သည်၎င်း၏ IPO အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့် streaming ဝန်ဆောင်မှု Soundcloud ကို ၀ ယ်မည်မဟုတ်
Chrome သည်သင်အားဂီတ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုအော့ဖ်လိုင်းသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်
သီချင်းများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုအော့ဖ်လိုင်းဖြင့်သိမ်းဆည်းနိုင်အောင် Google က Chrome ကိုအဆင့်မြှင့်ထားပြီးသင်လိုချင်သည့်အချိန်တိုင်းတွင်အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
[APK] Spotify ကိုအသစ်သောအနိမ့်အနိမ့်ဆုံးဘားဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည်
အီလက်ထရောနစ်ဂီတကိုရောစပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုပါ ၀ င်သည့် DJ စစ်စစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်
သင်ရောနှောခြင်းနှင့် DJing လောကတွင်စတင်ရန်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရှာနေပါက PRO edjing သည်ထိုသို့ပြုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူရို ၀.၀၀ ရောင်းရန်ရှိသည်
အမေဇုံသည် streaming content သုံးစွဲသူများကိုလွှဲပြောင်းယူရန်ခြိမ်းခြောက်နေသည်။ နောက်လမှာမင်းရဲ့ပလက်ဖောင်းအသစ်ကိုငါတို့သိမှာပါ။
အခြေအနေသည်နောက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ Google သည် Play Music ကိုနှစ်သက်သောအားဖြင့်၎င်းအရာများကိုအာရုံစိုက်မည့်ကြီးမားသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်ကို HQ Music အတွက် Android 7.0 ဟုခေါ်ပြီး၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်
ယနေ့ခေတ် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်သည်သင့်အတွက်အံ့သြစရာကောင်းစေမည့်ကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Google Play Store တွင်တေးဂီတ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ထို့ထက်ပိုသောလက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သော option အသစ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
Spotify Premium ကို သုံး၍ သီချင်းများ (သို့) သီချင်းစာရင်းများကိုသင့်ဖုန်းများအော့ဖ်လိုင်းတွင်မည်သို့သုံးနိုင်သည်ကိုသင်ပြပါမည်
တနင်္လာနေ့တွင်ထူးဆန်းပြီးရိုးရှင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သော Noon Pacific နှင့်အကောင်းဆုံးဂီတကိုရယူပါ
Noon Pacific သည်တေးသီချင်းများကိုသင်၏ Android စမတ်ဖုန်းမှတဆင့်ရရှိနိုင်စေရန်အကောင်းဆုံးဂီတကို“ ထိန်းသိမ်းခြင်း” တာဝန်ရှိသည့်ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Amazon Music Unlimited ကပွဲထုတ်ပြသခြင်းက Spotify နှင့် Apple Music အတွက်ပိုမိုခက်ခဲစေသည်
Amazon သည်သီချင်းဂီတလွှင့်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကို Amazon Music Unlimited ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပြီးသန်းနှင့်ချီသောသီချင်းများပါဝင်သည်
ဤတေးဂီတကလစ်သည်စစ်ထုတ်စက်များကိုခွင့်ပြုသည့်အခါ Prisma ၏ကြီးမားသောစွမ်းရည်ကိုပြသည်
မကြာခင်မှာပဲ Prisma ကဒီထုတ်လွှင့်ထားသောဂီတဗီဒီယိုကဲ့သို့သောရလဒ်များကိုရရှိလိမ့်မည်။
SoundCloud ကိုမကြာမီ Spotify မှ ၀ ယ်နိုင်သည်
SoundCloud သည်အထူးဂီတ streaming ၀ န်ဆောင်မှုများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအခါ Spotify သည်မကြာမီ၎င်းကို ၀ ယ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
သင်၏ပရိုဖိုင်သို့တေးဂီတကိုထည့်သွင်းခွင့်ပြုရန် Spotify နှင့်တွဲဖက်ပါ tinder
သင်၏ပရိုဖိုင်သို့တေးဂီတကိုထည့်သွင်းပါကလူကြိုက်အများဆုံးချိန်းတွေ့သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Tinder တွင်သင်ကိုယ်တိုင်ပိုကောင်းသည့်ပုံစံဖြင့်တင်ပြပါလိမ့်မည်။ Spotify နှင့်အတူမိတ်ဖက်။
ဒီနေ့မှာ Android အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့တေးဂီတဖွင့်စက်သုံးခုကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်။ သင်မလွဲမရှောင်သာဖြစ်တဲ့အတွက်
Huawei မှဖန်တီးသော Android အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစေသော application နှင့်သင်လိုချင်သည့်တေးဂီတအားလုံးကိုအခမဲ့ရယူပါ
တေးသီချင်းများကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင် Android ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှအခမဲ့ download လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်အဘယ်အရာကိုတပ်ဆင်ရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်ပြသမည်။
Minima Player, Android အတွက်တေးဂီတဖွင့်စက်အသစ်
ဒီနေ့ငါ Minimal Player ဆိုတဲ့နာမည်အောက်မှာတကယ်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ Android Player အသစ်တစ်ခုကိုတင်ထားတယ်။
Echo အသုံးပြုသူများအတွက် Amazon ၏ဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှုသည်တစ်လလျှင် ၅ ဒေါ်လာကုန်ကျနိုင်သည်
Amazon သည်အခက်အခဲရှိသောဂီတစီးဆင်းမှုကို Echo ကိရိယာဖြင့် ၀ င်ရန်နှင့်အကောင်းဆုံးဂီတကိုရရှိရန်လစဉ်ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာပေးရမည်။
Root မရှိဘဲ Android Marshmallow အတွက် YouTube Music Hack
ဒီနေ့ဒီ YouTube Music Hack နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံနှင့်မဆို Android Marshmallow တို့အတွက်ခိုင်လုံသော YouTube Music connection ပြproblemsနာများကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အဖြေပေးမည်။
[နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ၂-၈-၂၀၁၆] YouTube တေးဂီတကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နှင့်၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်တရားဝင်မဖြစ်သေးသောနိုင်ငံများတွင်မည်သို့ပျော်မွေ့ရမည်နည်း
ဒီနေ့ခေတ်မှာ YouTube Music ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမယ်၊ ဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှင်းပြတယ်။ တရားဝင်မရရင်တောင်ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်။
Android အတွက်ဂီတဖွင့်စက် Doremi2သည်ဂီတကိုအခမဲ့ download လုပ်သည်
Google Play Store တွင် Android မှအခမဲ့သီချင်းများကို download ပြုလုပ်နိုင်မည့် app တစ်ခုကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။
Play Music ကို ၆.၁၁ တွင် Album ပေါ်ရှိ "play" ခလုတ်များဖြင့် update လုပ်ပြီးမကြာမီ timer တစ်ခုကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်
လက်ရှိတစ်ခုတွင်၎င်းသည်အယ်လ်ဘမ်များနှင့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများအားလုံးနှင့်သီချင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သော Play Music အတွက်မူခလုတ်ကိုဖွင့်နိုင်သည်
Wonder.fm သည်အသုံးချနိုင်သောလွတ်လပ်သောဂီတအမျိုးအစားများကိုအချိန်တိုအတွင်းပြောင်းလဲသွားစေမည့် app နှင့် web service တစ်ခုဖြစ်သည်။
တေးဂီတသို့မဟုတ်အင်တာနက်ရေဒီယိုအက်ပလီကေးရှင်းများမှ Spotify နှင့်အလားတူအက်ပ်များမှတေးဂီတကိုမည်သို့တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြသည်။
BitTorrent Now သည် Android သို့ရောက်ရှိလာသည့်လွတ်လပ်သောဂီတအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
BitTorrent Now သည်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်သောဂီတအတွက်နေရာတစ်ခုဖွင့်ရန်နှင့်ဂီတသမားများနှင့်အသုံးပြုသူများမှ၎င်းမှအကျိုးရယူသည်
VOEZ သည်တေးဂီတအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုအဆိုပြုထားသည်။ ၎င်းသည်သင်သည်ဂီတအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုတီးခတ်သည့်ဂီတတီးဝိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သူဖြစ်လာလိမ့်မည်။
Android အတွက် Shazam သည်သင်နားထောင်နေသည့်မည်သည့်ဂီတကိုမဆိုယခုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်
Android အတွက် Shazam အတွက် "AUTO" option မှ app ကိုဖွင့်ရုံဖြင့်မည်သည့်ခလုတ်ကိုမျှနှိပ်စရာမလိုဘဲဖွင့်နေသောသီချင်းကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
Amazon သည်၎င်း၏အွန်လိုင်းဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်
အမေဇုံသည်နွေရာသီနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်နွေ ဦး ရာသီတွင်ရောက်ရှိလာမည့်၎င်း၏အွန်လိုင်းဂီတ streaming ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်နီးပါးအဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
Android တွင်တေးဂီတကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံး application များ
Android တွင်အခမဲ့တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင်တေးဂီတကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်သင်တပ်ဆင်နိုင်သောအက်ပ်များကိုရိုက်ထည့်ပါ
Sparkwave သည် Crescent Moon Games မှအသစ်ဖြစ်ပြီး Techno၊ ဆx္ဌဂံကမ္ဘာနှင့်သင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်မည့်မျဉ်းကြောင်းကိုထောက်ခံသည်။
BLW Music Visualizer နောက်ခံပုံများ၊ သင်နားထောင်နေသည့်ဂီတ၏စည်းချက်အတိုင်းသွားသောဂီတနောက်ခံပုံများ
ဒီကနေ့မှာ Android အတွက်အခမဲ့ Music Wallpapers သုံးခုကမ်းလှမ်းတဲ့ App တစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ပြပါပြီ။ သင့်ဂီတ၏စည်းချက်ကိုသွားသောကာတွန်းကားများ။
သင်မမေ့နိုင်သော Chromecast အတွက်ဂီတဖွင့်စက် 3
Streaming တွင်တေးဂီတကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့ဖြင့် Chromecast အတွက်ဂီတဖွင့်စက် ၃ ခုကိုယနေ့ တင်ပြ၍ ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။ ၎င်းကိုတိမ်တိုက်ထဲသို့မတင်ပဲနှင့်။
Apple Music ကို Android ဗွီဒီယိုများဖြင့်တေးဂီတဗီဒီယိုများဖြင့်ပြုလုပ်သည်
Apple Music ကို Android တွင်ထပ်မံအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောအသစ်တစ်ခုကိုရရှိစေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဂီတဗီဒီယိုများအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်
n7Player၊ Android အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားသည့်တေးဂီတဖွင့်စက်၊ သုံးစွဲသူကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်နှင့်အခမဲ့ဗားရှင်းတွင်ထည့်ထားသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အင်္ဂါရပ်များ။
ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတမှ Podcasts များသည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်သည်
Podcasts ကို Google Play Music မှာမနေ့ကမှတရားဝင်ဘလော့ဂ်ကနေကြေငြာခဲ့တဲ့နေ့ကအဖြစ်မှန်ပါ။
Qus သည်သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများစာရင်းကို Spotify, Soundcloud, YouTube နှင့်ပိုမိုသောအရာများပြုလုပ်သည်
Qus သည်ထူးခြားသောဖွင့်စရာစာရင်းများကိုဖန်တီးရန်လူကြိုက်အများဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုလေးခုတွင်သင်၌ရှိသောသီချင်းများအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Google Play Music ကိုAprilပြီလ ၁၈ ရက်မှာ Podcasts လွှင့်မယ်
Aprilပြီ ၁၈ ရက်တွင် Podcasts သည် Google Play Music သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၅ တွင်ကြေညာပြီးနောက်၌တွေ့မြင်နိုင်သည်။
Groove Planet မှကဗျာဂီတဖြင့်သင်၏ရစ်သမ်ဂြိုလ်ကိုဖန်တီးပါ
Groove Planet သည်အားကစားနှင့်ကပွဲမ ၀ င်ခင်သင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားသောမှတ်စုများပိုမိုရရှိရန်အတွက်စည်းချက်အတိုင်းလိုက်နာရမည့်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Lost in Harmony သည်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုကိုထူးခြားစေသောအရာအားလုံးပါ ၀ င်သည့်အထူးဂီတဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်
Android Music အတွက် Android Music သည်သီချင်းများကို SD ကဒ်တွင်သိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်
ယနေ့ခေတ်မှသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းများကို Apple Music မှသင်၏ Android ဖုန်း SD card သို့ကူးယူနိုင်သည်
ဒီဂျစ်တယ်ဖြင့်တင်သွင်းသောရေဒီယိုသည်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးအီလက်ထရောနစ်ဂီတ streaming ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်
Digitally Imported Radio သည်အီလက်ထရောနစ်တေးဂီတကိုလွှင့်ရန်သီးသန့် app တစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သော interface နှင့် channel 90 ကျော်ရှိသည်
streaming ဂီတ app ဖြစ်သော SomaFM သည်အခမဲ့ဖြစ်လာသည်
SomaFM သည်အီလက်ထရွန်နစ်နှင့်အင်ဒီဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Android တွင်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်လာသည်
Android တွင်ဗွီဒီယိုနှင့် podcasts များကိုလွှင့်ရန် Spotify အဆင်သင့်ဖြစ်သည်
Spotify သည်ပိုမိုသောဝန်ဆောင်မှုများကိုဗွီဒီယိုနှင့် podcasts များကိုသန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများထံသို့ယူဆောင်လာရန် Spotify Now ကိုစတင်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်လိုသည်
သင်၏ Android terminal တွင်တေးဂီတအခမဲ့ရယူရန်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ
ဒီနေ့မှာသင့်ကို Fildo ကို apk format နဲ့အခမဲ့ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အကောင်းဆုံး application ဖြစ်လာနိုင်သောအသုံးအနှုန်းဖြင့်တင်ပြသည်။
PowerAmp ဂီတဖွင့်စက်သည် Public Alpha ကို UI အသစ်နှင့်အသံအင်ဂျင်ဖြင့်ထုတ်ပေးသည်
interface နှင့် audio processing engine တို့သည်အများပြည်သူ alpha version ၌ရှိသော version အသစ် 3.0 အတွက်သိသာသောတိုးတက်မှုများဖြစ်သည်
နှစ်သစ်ကူးအကြိုညပွဲကို Chromecast အထောက်အပံ့ဖြင့်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်ဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပါ
MediaRiver၊ အခမဲ့ဂီတ၊ စာအုပ်များ၊ နောက်ခံပုံများနှင့်အခမဲ့အက်ပ်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်
Spotify Party သည်ပွဲများနှင့်ပွဲအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်အားကူညီရန်ဤအွန်လိုင်းဂီတလွှင့်ခြင်းအစီအစဉ်၏အလောင်းအစားအသစ်ဖြစ်သည်။
သီချင်း၊ အယ်လ်ဘမ်သို့မဟုတ်အနုပညာရှင်အားဖြင့်ညီမျှခြင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည့် PlankTome တွင်သင့်တွင်ဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတမှမိသားစုအစီအစဉ်ကိုလူ ၆ ယောက်အထိဒေါ်လာ ၁၄.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်
ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်ပြင်သစ်စသည့်နိုင်ငံအသီးသီးမှအသင်းဝင်ခြောက် ဦး အထိအတွက် Google Play Music အစီအစဉ်ကိုဒေါ်လာ ၁၄.၉၉ ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
Android အတွက် Google ကိုစီးရီး၊ ရုပ်ရှင်နှင့်တေးဂီတကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်တိုးတက်သည်
ဂူးဂဲလ်မှစီးရီး၊ ရုပ်ရှင်များနှင့်တေးဂီတများကိုရှာဖွေရန်ဤအင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်ကဏ္ new အသစ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုအသစ်
YouTube ဂီတကဲ့သို့ဂီတ streaming အက်ပ်များကိုသုံးနေစဉ် Opera Max သည်ဒေတာများကိုလည်းသိမ်းဆည်းပေးလိမ့်မည်
Opera Max တွင်ရရှိနိုင်သည့် YouTube Music ကဲ့သို့သောဂီတအက်ပလီကေးရှင်းများမှသုံးစွဲသူများ၏ ၅၀% ကိုသိမ်းဆည်းရန်အချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း
ဂီတဖန်တီးမှုပေါင်း Stagelight ဂီတမှသင်ယူခြင်း
သင်၏ Android တွင် Apple Music ကိုစမ်းကြည့်လိုပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ၎င်းသည် Google Play သို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်မည်သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်ကိုရှင်းပြထားသည်။
Soundcamp သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်ဂီတဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည့် Samsung app ဖြစ်သည်
တေးဂီတဖန်တီးမှုသည်သင်၏အရာဖြစ်ပါက Soundcamp ဟုခေါ်သောဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်၏ Samsung စမတ်ဖုန်းအတွက်သာဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
Pulsar သည်လုံးဝအခမဲ့ဂီတဖွင့်စက်ဖြစ်ပြီးသင်၎င်း၏စမတ်ဖွင့်ရန်စာရင်းများနှင့် Material Design နှင့်သင်နှစ်သက်မည်
Spotify Running Android ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းများကိုသင်၏အဆင့်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပါ
Spotify Running ဖြင့်သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ဖွင့်သောအခါသင်၏အရှိန်နှုန်းသည်သင့်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်သင်လိုအပ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုအားလုံးကိုပေးလိမ့်မည်။
Android တွင်တေးဂီတဖန်တီးခြင်းအတွက် IGrand နှင့် iLetric Piano အက်ပလီကေးရှင်းများ
iOS တွင်အောင်မြင်မှုရရန်ထောက်ခံသည့် Android ဖုန်းရှိဂီတပညာရှင်များအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခု။
[APK] Spotify for Tablets ၏ဗားရှင်းကို download လုပ်၍ သင်၏ Android mobile တွင်တပ်ဆင်ပါ
Android ဖုန်းများ၌တပ်ဆင်ရန်နှင့်မဖြစ်မနေကျပန်းပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုပိတ်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသောတက်ဘလက်များအတွက်ပြင်ဆင်ထားသော Spotify apk ကို download လုပ်ပါ။
AC / DC ကို Play ဂီတနှင့် Spotify ကဲ့သို့သောဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှုများမှရရှိနိုင်ပါသည်
AC / DC သည် Play Music and Spotify အပါအဝင်ဂီတ streaming ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုရရှိသည်။ ဂီတအတွက်အတော်လေးဖြစ်ရပ်တစ်ခု။
[APK] Jair Music Player သည်အကောင်းဆုံးသောဒီဇိုင်းဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်
ဒီနေ့ငါအတွက်ကတော့ Android အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော Jair Music Player ကို ထပ်မံ၍ အကြံပေးလိုပါသည်။
ရေဒီယိုဖြင့်အခမဲ့သီချင်းများပေးမည်ဖြစ်သော်လည်းဆောင်း ဦး ရာသီရောက်သည့်အခါ Spotify နှင့် Apple Music တို့နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်ကြော်ငြာများကို Google ကပေးလိမ့်မည်။
[APK] Netease ဂီတသည်တရုတ် Spotify ကိုစပိန်ဘာသာသို့အပြည့်အဝပြန်ဆိုခဲ့သည်။
HTC Mania ၏သူငယ်ချင်းများ၏ Android အသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ထို့နောက် Netease Music ၏ APK ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ပြန်ဆိုပါမည်။
နောက်ဆုံးပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်များ၏အယ်လ်ဘမ်များကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောတရုတ် Spotify [APK] Netease Music
Netease တေးဂီတသည် Spotify Premium ထက်အခမဲ့အခမဲ့ဖြစ်သည်။
CloudPlayer သည်သင်၏ဂီတကို Dropbox, OneDrive နှင့် Google Drive မှစီးဆင်းစေသည်
CloudPlayer သည်သင်၏ဂီတကို Dropbox, OneDrive နှင့် Google Drive မှစီးဆင်းရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအဆိုပြုချက်ဖြစ်သည်
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လိုင်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပေးဆောင်ရသောဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်
Line Music သည်ယနေ့တွင်ဂျပန်၌စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောလူကြိုက်များသောအွန်လိုင်းစာတိုပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှု၏အလောင်းအစားဖြစ်သည်။
Google Play ဂီတ၊ အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် Spotify ခေါင်းနှင့်ခေါင်း
အောက်ပါဂီတ streaming ၀ န်ဆောင်မှုသုံးခုမှတစ်ခုစီကိုကျွန်ုပ်တို့နှိုင်းယှဉ်ပြသခဲ့သည်။ တေးဂီတ၊ အက်ပဲလ်ဂီတနှင့် Spotify ကိုဖွင့်ပါ
ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်အက်ပဲလ်ဂီတသည် Android သို့လာသည်
မနေ့ကပဲအက်ပဲလ်ဟာ Android Music ကို Android သို့ရောက်ရှိမယ်လို့မနေ့ကကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ အရာများစွာကိုဆိုလိုတာကအားလုံးအံ့သြစရာသတင်း။
Orpheus ဂီတဖွင့်စက်၊ တကယ့် Chromecast အထောက်အပံ့ပါသောပစ္စည်းဒီဇိုင်းဂီတဖွင့်စက်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Orpheus ဂီတဖွင့်စက်ကိုစိတ် ၀ င်စားပြီးအခမဲ့သုံးနိုင်သောပစ္စည်းဒီဇိုင်းဂီတဖွင့်စက်ကိုတင်ပြသည်
Android မှအခမဲ့ဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံး application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် [APK] Mp3Pig [UPDATED]
Android မှအခမဲ့သီချင်းများကို download လုပ်နိုင်မည့် Mp3Pig application တစ်ခုကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တင်ပြသည်
Gramophone သည်လှပသောပစ္စည်းဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းရှိသော Android အတွက်လုံးဝအခမဲ့သီချင်းဖွင့်စက်ဖြစ်သည်။
မယုံနိုင်လောက်အောင် Huawei ဂီတဖွင့်စက်ကိုသင်၏ Android [JB +] တွင်တပ်ဆင်ပါ။
ကတိတော်သည်အကြွေးဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် Android terminal အများစုတွင်တပ်ဆင်ရန်အတွက်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဆိပ်ကမ်းများ (P, Mate နှင့် Honor) ၏ Huawei ဂီတဖွင့်စက်၊ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ထားသောဆိပ်ကမ်းကိုယနေ့ငါထားခဲ့မည်။ ။
Google Play Music ၏ဗားရှင်းသစ်သည်ဂီတဗီဒီယိုရှာဖွေမှုကိုထည့်သွင်းထားသည်
ဤနေရာတွင်သင့်အားဂူဂဲလ်ပလေးဂီတဗားရှင်းအသစ်ကိုအပလီကေးရှင်းမှဂီတရှာဖွေမှုတွင် YouTube ဗီဒီယိုများထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့သောထပ်ဆောင်းအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ချန်ထားသည်။
ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတကသီချင်း ၅၀,၀၀၀ အထိသိုလှောင်မှုကိုတိုးစေတယ်
Google Play Music သည်သီချင်းပေါင်း ၅၀,၀၀၀ အထိတင်ရန်ခွင့်ပြုထားပြီးမူလသီချင်းပေါင်း ၂၀၀၀၀ မှပမာဏကိုတိုးပွားစေသည်
[လှည့်ကွက်] သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းများကိုမည်သည့် application ကိုမှမတပ်ဆင်ဘဲဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
နောက်ထပ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာလှည့်ကွက်တစ်ခု၊ ဤအချိန်တွင်မည်သည့် application ကိုမှတပ်ဆင်စရာမလိုဘဲသင်အကြိုက်ဆုံးဂီတကို download လုပ်ပါ
[APK] CM12 ဂီတဖွင့်စက်ကို Android 4.4+ တွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထည့်ပါ
ဤနေရာတွင်သင့်တွင် CM12 ဂီတဖွင့်စက်၊ Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုရှိသည်
ဒီနေ့မှာတော့ဂူဂဲလ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Play Store မှတရား ၀ င်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်သောသီချင်းနှင့် mp3 မှသီချင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည့်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုယနေ့ကျွန်ုပ်ပြသည်။
Lenovo K3 « Music Lemon »သည် Xiaomi Redmi ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ အောက်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဖုန်းဖြစ်သည်
Lenovo K3 Music Lemon ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရှင်းပါသည် - ဒေါ်လာ ၁၀၀ ထက်မပိုသောဖုန်းဖြင့် Xiaomi Redmi ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရပုံ
နောက်ခံဖွင့်ခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်းနှင့်အခြားအရာများဖြင့် YouTube Music Key ကို Google ကကြေငြာခဲ့သည်
နောက်ခံပြန်ဖွင့်ခြင်း၊ အော့ဖ်လိုင်းအသံနှင့်ကြော်ငြာဖယ်ရှားခြင်းတို့ကိုအဓိကပြုလုပ်ထားသော YouTube Music Key တွင်ပါဝင်သည်
Energy Music Box BZ6 သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံတွေ့ရန်ထက်များစွာကမ်းလှမ်းသောကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်
Retro ဒီဇိုင်းရှိသော်လည်း Energy Music Box BZ6 သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများစွာပေးနိုင်သည်။
xPlod သည်ပေါ့ပါး။ အလုပ်လုပ်နိုင်သော Android 5.0 Lollipop ပစ္စည်းဒီဇိုင်းပုံစံဂီတဖွင့်စက်၊ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
FireTube ဖြင့်သင်၏ Android ရှိ YouTube သီချင်းအားလုံးနားထောင်ပါ
FireTube သည် YouTube တေးဂီတအားလုံးနှင့်ချန်နယ်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားအားလုံး၏နောက်ခံအသံပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်
ACEMusic ကို XDA ဖိုရမ်များမှ beta ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ Android L အတွက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့်ထိတွေ့မှုရှိခြင်း
Android တွင် streaming ဂီတကိုခံစားရန်နှင့်အတူသုံး applications များ
သင်၏ terminal တွင်ဘာတစ်ခုမှဒေါင်းလုပ်လုပ်စရာမလိုဘဲ Android တွင်တေးဂီတကိုနှစ်သက်လိုပါက streaming ကိုခံစားရန်အက်ပလီကေးရှင်းသုံးခုကိုကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည်။
Android Wear အတွက်အကောင်းဆုံး application များ၊ ယနေ့ Stellio Music Player သည်သင်၏ Smartwatch အတွက်အကောင်းဆုံးသောသီချင်းဖွင့်စက်ဖြစ်သည်
Stellio Music သည်သင်၏စမတ်နာရီသို့မဟုတ် Android Wear လည်ပတ်ရေးစနစ်နှင့်အတူစမတ်နာရီအတွက်အလွန်ကောင်းသောသီချင်းဖွင့်စက်ဖြစ်သည်။
Android ပေါ်ရှိ Cloud တွင်သိမ်းဆည်းထားသောသီချင်းများကိုမည်သို့နားထောင်ရမည်နည်း
သင်၏တေးဂီတစာကြည့်တိုက်တစ်ခုလုံးကိုမိုးတိမ်တွင်သိုထားပြီးသင်၏ terminal တွင်တေးဂီတကိုမည်သို့တိုက်ရိုက်ဖွင့်ရမည်ကိုသင်သိလိုလျှင်၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြလိမ့်မည်။
Xposed အတွက် TM module ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Premium Account ရှိသည့်အတိုင်း Spotify ကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက်သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၎င်းကို Apollo ဟုခေါ်သည်
ဒီမှာငါ့အတွက် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဖွင့်စက် apk, Apollo အမည်နှင့်ဗွီဒီယိုတွင်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုတွေ့နိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာဂူဂဲလ်ပလေးဂီတအခမဲ့မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် Android မှာသင်၏တေးဂီတအားလုံးကိုမည်သို့တပြေးညီမည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုရှင်းပြတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုရှိတယ်။
#Android အတွက် MIUI တေးဂီတဖွင့်စက် [APK]
ဤနေရာတွင် Android 4.0 နှင့်အထက်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတပ်ဆင်ရန်အတွက် MIUI ဂီတဖွင့်စက် APK ရှိသည်။
ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတမှမူကွဲ ၅.၆ မှခွင့်ပြုထားသောပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုကန့်သတ်သည်။ [APK]
Google Play Music သည်တရားဝင်ဖုန်းများ (၁၀) ခုကိုကန့်သတ်ထားပြီးဖုန်းငါးလုံးတပ်ဆင်နိုင်သည်
Android အတွက်တေးဂီတဖွင့်စက် ၃ ခုသင်မမေ့နိုင်သော
Android အတွက် application တွေအကြောင်းပြောရမယ်၊ အသံကိစ္စကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်။ သင့်အားတေးသီချင်းဖွင့်ရန်အတွက်အဆိုပြုချက် ၃ ခုပြုလုပ်ပေးသည်။
Jair Player: Music Rainbow, Android အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခမဲ့ဂီတဖွင့်စက်
Jair Player: Music Rainbow သည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဂီတဖွင့်စက်ဖြစ်နိုင်သည်။
Samsung Galaxy S5 ၏တရားဝင်တေးဂီတဖွင့်စက်ကို download လုပ်ပါ
မည်သည့် Android အတွက်မဆို Samsung Galaxy S5 ဂီတဖွင့်စက် [APK]
ဒီနေရာမှာ Android Android ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး install လုပ်နိူင်ဖို့ဇာတိပလေယာ Samsung Galaxy S5 ဂီတဖွင့်စက်ကိုတပ်ဆင်ထားတယ်
သင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်များမှတေးဂီတကိုကိုင်တွယ်ရန်လျှောက်လွှာ ၃ ခု
တီဗီကကျွန်တော်တို့ကိုအမှတ်အသားပြုပြီး Android ဖုန်းများမှာလည်းပြသသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနှစ်သက်ဆုံးရုပ်ရှင်များမှဂီတကိုရယူရန်သင့်အားအက်ပလီကေးရှင်း ၃ ခုယူဆောင်လာပါမည်။
ဖွင့်စရာစာရင်းများကိုယခု Google Play ဂီတတွင်တည်းဖြတ်။ မျှဝေနိုင်သည်
ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတရှိဖွင့်စရာစာရင်းများကိုဝက်ဘ် desktop ဗားရှင်းကဲ့သို့ပြုပြင်နိုင်သည်။
Spotify ၏ဒီဇိုင်းသစ်သည် Android သို့ရောက်ရှိသွားသည်။ [Download APK]
Spotify ဒီဇိုင်းသစ်ကိုယခုအခါ Android တွင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီနှင့်အိုင်ဖုန်းနှင့် desktop ကွန်ပျူတာများမှကုမ္ပဏီထုတ်လွှင့်သည်
Kickstarter ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Android တွင် foobar2000 တေးဂီတဖွင့်စက်ကိုခံစားနိုင်သည်
Kickstarter ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ယခုနှစ်အကုန်တွင် Android တွင် foobar2000 ကိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်
Music Play သည် Chrome ကိုဂီတဖွင့်စက်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်
Google Play Music မှစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး၎င်းကို Google Chrome ကိုဂီတဖွင့်စက်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်၏ Android terminal နှင့်တေးဂီတကိုအပြည့်အဝမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းသင်စဉ်းစားဖူးပါကယနေ့ကျွန်ုပ်သည် Android ထုတ်ကုန်များမှ streaming ဂီတကိုမည်သို့နားထောင်ရမည်ကိုရှင်းပြသည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Google Play Music ၏နောက်ဆုံးမူကွဲကို apk တွင် Download လုပ်ပါ
Android အတွက် Google Play Music ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို download လုပ်ရန်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်ကိုဒီမှာနှိပ်ပါ။
[Port] Nokia Music Player Nokia X စီးရီးဂီတဖွင့်စက်
ဤနေရာတွင် Nokia X အကွာအဝေး၏အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များ၏ Android နှင့်ယခုအချိန်တွင်မူရင်းဂီတဖွင့်စက်၏ APK ကိုသင့်အားထားပေးမည်။
Music Inc. သည်သင့်အားဂီတမန်နေဂျာဖြစ်စေသည်
UK Music သည်အနုပညာရှင်များနှင့်ဂီတအဖွဲ့များဖြစ်သည့် Music Inc. ကိုကိုယ်စားပြုသည့်စီမံခန့်ခွဲမှုဂိမ်းတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။
PolyFauna လို့ခေါ်တဲ့ Radiohead ဂီတအဖွဲ့ရဲ့ဂီတနဲ့အမြင်အာရုံဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု
PolyFauna သည်သင့်အား“ Radiohead” သီချင်းအပေါ်အခြေခံထားသောအမြင်အာရုံနှင့်ဂီတစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ပေးသည့် Radiohead ဂီတအဖွဲ့၏ဖန်တီးမှုလောကသို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အား Lenovo terminal များကဲ့သို့သော music player ၏ apk Android အတွက် Lenovo Music Player ၏ apk ကိုတိုက်ရိုက်ချန်ထားပါသည်
GMobile, လုံးဝအခမဲ့ Spotify
GMobile သည် Spotify နှင့်ဆင်တူသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်စရာများစွာပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးထပ်မံကြော်ငြာစရာမလိုပါ။
Meridian Player Trascend၊ လမ်းဘေးဂီတနှင့်ဗီဒီယိုဖွင့်စက်
Meridian Player Trascend သည် Android အတွက်အခမဲ့ရယူနိုင်သောအကောင်းဆုံးအသံနှင့်ဗီဒီယိုပလေယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အံ့ Android စရာကောင်းသည့် Android Apps, Today Beat Cloud & Music Player
Beat Cloud & Music Player သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်နိုင်ချေနှင့်ပြင်ဆင်မှုရွေးချယ်စရာများကိုပေးထားသည့်အသံဖွင့်စက် application တစ်ခုဖြစ်သည်။
မည်သည့် Android တွင်မဆို Apollo ဂီတဖွင့်စက်ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
Apollo ဂီတဖွင့်စက်သည် Cyanogenmod ၏ဇာတိကစားသမားဖြစ်ပြီးယခုကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်း Android ကိုရရှိနိုင်ပြီ။
Android အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ယနေ့ခေတ် AllMP3MusicID
AllMP3MusicID သည် Android အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
အံ့သြစရာကောင်းသည့် Android Apps, ArmAmp ဂီတဖွင့်စက်
ArmAmp တေးဂီတဖွင့်စက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့် multi-format အထောက်အပံ့များပေးသော Android အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကတ်တလောက်ထဲတွင်ပါသင့်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်လွမ်းဆွတ်မှုအားလုံးနှင့်၎င်းအားအကောင်းဆုံး Android ဂီတအက်ပလီကေးရှင်းအဖြစ်ယုံကြည်နေသူအားလုံးအတွက်ဗားရှင်း ၁.၀ တွင် MIUI ဂီတဖွင့်စက်ရှိသည်။
Google Play Music တွင်သင်၏တေးဂီတကို SD ကဒ်သို့ကူးယူ [APK ကို Download]
သင်၏ဂူဂဲလ်ပလေးအားပြင်ပသိုလှောင်မှုတွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည့်အသစ်တစ်ခုကို Google Play Music ရရှိသည်။
Spotify ပရီမီယံအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေး ၄၈ နာရီ
Spotify သည်ကျွန်ုပ်တို့အား Soptify Premium သို့ ၄၈ နာရီ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းပြီး ၄ င်း၏သီးသန့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
Spotify Connect သည် Android သို့ရောက်သည်
Spotify Connect သည်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုပံ့ပိုးပါကသင်၏စပီကာများမှစီးဆင်းမှုကိုဂရုစိုက်ပါသည်။
SoundCloud သည်အခမဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပြီးသီချင်းများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်နားထောင်ရန်နှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည်။
iSense သည် Apple ပုံစံ 3D ဂီတဖွင့်စက်ဖြစ်သည်
iSense သည် Android အတွက်တေးဂီတဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် iPhone သို့မဟုတ် iPad ကဲ့သို့အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဆင်တူသည့် interface ကိုပေးထားသည်။
ဂူးဂဲလ်ပလေးဂီတကိုရေဒီယိုအတွက် "ငါကံကောင်းချင်တော့မယ်" နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်
အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ရန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်ဤဂီတပလေယာငါးခုဖြစ်သည့် PowerAmp, Winamp, VLC, Neutron Music Player နှင့် N7 Player တို့သည်ထိုနေရာတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ရေဒီယိုအတွက်ဂီတအမျိုးအစားများဖြင့် Google Play တေးဂီတအသစ်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ရေဒီယိုအမျိုးအစားများပါသောဂူဂဲလ်ပလေးဂီတဗားရှင်းအသစ်နှင့်အခြားအရာများသည် "pin" ပါသည့်သီချင်းများဒေါင်းလုပ်စာရင်းတိုးတက်လာသည်။
ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတကိုဒေတာအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်မှုဖြင့် update လုပ်သည်
ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတဗားရှင်းမှပေါ်လွင်ချက်များအကြားဒေတာသုံးစွဲမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာ download လုပ်ခြင်း။
Music.Mind Player၊ မတူညီသောအသံဖွင့်စက်
Music.Mind Player သည် Android အတွက်အသံဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Beta ဗားရှင်းတွင်ပင်ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်နိုင်ချေအသစ်များနှင့်အပိုဖြည့်စွက်မှုများစွာပေးထားသည်
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင် Android terminal မှအခမဲ့ download လုပ်၍ Mp3 Pro ကို download လုပ်၍ download လုပ်ပါ
သင်၏ကိုယ်ပိုင် Android terminal မှသင်၏အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုအခမဲ့ download လုပ်၍ Play Store တွင်ရရှိနိုင်သောအခမဲ့ Mp3 Pro ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲချနည်း။
3 Cube ဂီတဖွင့်စက်၊
3 Cube Music Player သည် Android အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော 3D music player ဖြစ်ပြီးလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်
ယခု Beta အခမဲ့ဂီတဖွင့်စက်ကိုဖွင့်နေသည်
ယခု Playing သည် Android အတွက်တေးဂီတဖွင့်စက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Apollo Music Player ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုအခြေခံသည်။
DivX Stash ကိုအင်တာနက်မှတေးသီချင်းများကိုကွန်ပျူတာသို့ကူးယူရန်မလိုပဲအထူးနည်းလမ်းဖြင့်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။
ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတသည်စပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာပြီး AndroidSIS သို့ရောက်သော်၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အားသာချက်များကိုပြောပြသည်
Mobeam သည် Android application ဈေးကွက်ကိုလျှောက်လွှာတင်ရန်ရည်ရွယ်ထားပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမိုဘိုင်းငွေပေးချေရာတွင်လွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်
Idrod Music Free, သင်၏ Android ကို iPod Classic အဖြစ်ပြောင်းပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိုမူရင်း Apple iPod Classic ၏အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်လုံးဝအခမဲ့မာလ်တီမီဒီယာပလေယာ
Samsung Galaxy Music, SRS နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစပီကာများကြောင့်ဂီတကိုနှစ်သက်သည်
Samsung Galaxy Music၊ Android စမတ်ဖုန်းအသစ်နှင့် SRS နည်းပညာဖြင့်စပီကာများကို ကျေးဇူးတင်၍ သင်၏ MP3 ကိုသယ်ဆောင်စရာမလိုတော့ပါ။ ဂီတကိုခံစားပါ။
Miui Music Player သည် Miui roms များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဇာတိဂီတအက်ပ်ဖြစ်သည်။
Wondershare Player, လုံးဝအခမဲ့ဗီဒီယိုနှင့်ဂီတဖွင့်စက်
Wondershare Player သည် Play Store တွင်အခမဲ့ဗီဒီယိုဖွင့်စက် ဖြစ်၍ Streaming လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။
Samsung သည်စပိန်နိုင်ငံရှိ Music Hub ကို Galaxy S III တွင်သာတင်ဆက်ခဲ့သည်
Music Hub နှင့်အတူကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည် streaming များမှတဆင့်ဂီတကဏ္iတွင် iTunes နှင့် Spotify ကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။